Dastabej » नेपालगन्जलाई महानगर बन्न नदिनु संक्रिण सोंच होः मेयर डा. राणा
नेपालगन्जलाई महानगर बन्न नदिनु संक्रिण सोंच होः मेयर डा. राणा – Dastabej
उत्तरमा कोहलपुरको पहाड, दक्षिणमा हाम्रो बोर्डर, पुर्वमा राप्ती नदी र पश्चिममा मानखोला यती भए पछि हरेक कुराले सम्पन्न रहन्छौ ।
यति बेला नेपालगन्जलाई उपमहानगरबाट महानगर बनाउनु पर्ने बहस फेरि तातिएको छ । प्रदेश सरकारले महानगर बनाउन अध्ययनका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँदै आए पनि काम अगाडि बढ्न नसक्दा फ्रिज हुने गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिका, डुडवा, खजुरा र जानकी गाउँपालिकालाई गाभ्ने गरी महानगर बनाउने बहस चल्दा कतिपयले विरोध गर्दै आएका छन् । महानगर बन्दा त्यसको दिर्घकालिन फाईदा, असर र सम्भावनाका खोजि गर्नुका साथै महानगर बन्न नदिने बाधक को हुन ? के महानगर बन्न सम्भव छ ? दस्ताबेजकर्मी शम्भुप्रसाद थारुले नेपालगन्ज उपमहानगरका मेयर डा. धवल शम्सेर राणासंग गरेको कुराकानीः
# प्रदेश सरकारले नेपालगञ्ज र कोहलपुरलाई गाभि महानगर बनाउन प्रस्ताब गर्दे सम्भव्यता अध्यायन गर्ने भनेको छ ? यसलाई तपाई कसरी लिनु भएको छ ?
अब यो कुरा अहिलेको होइना हामीले ४ बर्ष पहिलेबाटै चलाउदै छौ र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले फिजिबिलिटी स्टडि सम्भवता अध्यायन गराउदै आएकोछ । र प्रदेशले प्रत्येक बर्ष बजेट हाल्छ र त्यो बजट ल्याप्स हुन्छ । यो बर्ष पनि रेडियोमा भनेको छ । मैले त के भनेको छु भने नेपालगञ्ज, कोहलपुर हाम्रो जिल्लाकै भबिष्यका लागि महानगर बनााउनु पर्छ । यो महानगरपालिका बनाउने क्रममा उत्तरमा कोहलपुरको पहाड, दक्षिणमा रुपैडियाको नाका, पुर्वामा राप्ति नदी र पश्चिममा मानखोला यो सबै मिलाएर महानगर बनाइम भने सय बर्षको लागि नेपालगञ्ज कोहलपुर यो क्षेत्रलाई अरु कसैसिता बिकासको लागि हात फैलाउनु पर्दैन ।
# मेयरसाब । त्यसो भए पुर्वाधारको हिसाबले महानगर बन्न सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
यो पुर्वाधारको कुरा होइना भन्दा पनि राजनितिक निर्णय हो । अहिले सम्म महानगर बने सबै राजनितिक निर्णय हो । पुर्वाधार त बिस्तारै पूरा हुदै गर्छन । तर राजनितिक निर्णय, राजनितिक दृर्धता, र राजनितिक हिम्ममत राख्नु पर्छ । यती यो क्षेत्रलाई महानगर बनायो भने नेपालगञ्ज,कोहलपुर, डुडुवा, जानकी, खजुरा र केही भाग बैजानाथको पनि पर्ला । यो भाग एकदमै बिकसित हुन्छ । र मध्यपश्चिम, सुदुर पश्चिमकै मुख्य शहर हुन्छ ।
# जस्तै तपाई पनि बिज्ञ हुनुुहुन्छ । सम्भव्यता अध्ययन गर्दा कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?
मैले भनिहाले नि सम्भव्यता त अध्ययन भैराखेको छ । एउटा प्रदेशले र एउटा नगरपालिकाले गराईराखेछन । तर अब यो कस्तो हो भने कोइकोइ नेताले हैना यो गाभ्नु हुदैन । आप्mनो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गाभ्न हुदैन । महानगरपालिका बनाउनु हुदैन । हामी किन मिसिने नेपालगन्जमा ? अस्ति कोहलपुरमा एउटा भेला भाथ्यो । त्यो भेलामा हामी किन मिसिने नेपालगञ्जसिता । हाम्रो ठाउँ किन दिने ? हाम्रो यति बिकास भैसक्यो ? बरु हामी राप्ती सोनारी, बैजानाथलाई मिलाए उपमहानगर बनाउछौ भनेर भन्दाखेरी मैले भने जुन कुरा तपाईहरुले हमीलाई भनिराख्नु भाछा, त्यो कुरा राप्तीसोनारी र बैजानाथले तपाईहरुलाई भन्छ । उनीहरुको यत्रो अम्दानी छ । राप्तिसोनारीको किन मिसिन्छ कोहलपुरसित । यो कुरा त कस्तो हो भने पछि आफु आफ्नो व्यक्तिगत राजनितिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर, यो क्षेत्र, नगर र जनताको हितमा उभिन सक्यो भने अनि, त्यसमा को मेयर हुने, को नहुने, त्यो पछिको कुरा हो । यो कलन्तरमा कहिले को होला कहिलो को होला, त्यसको चिन्त्ता गर्नु हुदैन । यो समग्र रुपले इन्टर नेशनल एयरपोर्ट, रेलबे स्टेशन, भोली प्रशासनिक निकाय, एनजिओ आइएनजिओ सबैलाई महानगरपालिकामा आउन बाध्य हुन्छन् । महानगरपालिका भने पछि कोहलपुर, खजुरा, डुडुवा, जानकी भन्ने कुरै हुदैन । जस्तै अहिले नेपालगन्ज उपमहनगरपालिकामा ११ वटा साबिकका गाबिसहरु गभिएका छन् । यी सबै नेपालगन्ज उमहानगरपालिका भैसकेका छन् । हामीले पुरैनी गाबिस, पुरैना गाबिस, परसपुर गाबिस कहाँ भन्छम् ,सबै नेपालगन्जमा अन्र्तगत आइसकेकाछन् । त्यस्तै कोहलपुर, खजुरा, जानकी, डुडुवा सबै नेपालगन्ज हुन्छ । यो तेरो मेरो भन्ने कारण नै छैन । बिकास चारै तिर हुन्छ ।
# जस्तै मेयर साब महानगरको परिकल्पना गर्दै गर्दा तपाईले देखेको महानगर कस्तो हो ?
एकदमै उपयुक्त, हरेक कुराले सम्पन्न र भुगोलमा मैले भनिहाले उत्तरमा कोहलपुरको पहाड, दक्षिणमा हाम्रो बोर्डर, पुर्वमा राप्ती नदी र पश्चिममा मानखोला यती भए पछि हरेक कुराले सम्पन्न रहन्छौ । र एउटा बिशाल नगर मध्ये र सुदुरपश्चिमको हुन्छ । र यसको भबिष्य उज्जल हुन्छ । कसैले ठग्ला, कसैले केही कुरा का.हाँ लग्देला, यहाँबाट हटाइदेला भन्ने पिरै नगरे हुन्छ ।
# यो महानगरको लागि तपाईले तत्काल के चुनौती देख्नु हुन्छ ?
अब राजनीतिक निर्णय गर्न सक्न पर्याे । स्थानीय नेताहरु आफ्नो आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न पर्यो । जनता त चाहन्छन् हेर्नुस् को चाहन्न ठूलो शहरमा बस्ने ? को चाहन्न ठुलो शहरसंग नाम जोड्न ? को चाहन्न अन्र्तराष्ट्यि एयरपोर्ट होस्, ठुल्ठुला स्टेडिम होस् । ठुल्ठुला कलेजहरु होस् । बाटाघाटा सबै बनोस् । एनजिओ आइएनजिओ, प्रहरी प्रशासनका ठुल्ठुला अड्डाहरु होस् को चाहन्न ? । तर यसको बाधा मेरो पद जाने हो कि । मेरा वार्डमा म जित्न नसक्ने हो कि, म मेयरमा जित्न सक्दैन कि ? भोली मेरो पार्टी जित्न नसक्ने हो कि ? भन्ने यो संक्रिन बिचारधाराले समस्या पार्न सक्छ । तर आम जनतालाई सोध्नु हुन्छ भने सबै चाहन्छन् ठुलो क्षेत्रमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका महानगरपालिका होस् । त्यसमा खजुरा, कोहलपुर, डुडुवा जानकी सबै एक भए लाग्नु पर्छ । त्यसमा कुन प्रोजे्रक्ट खजुरा गयो के समस्या होला । कुन प्रोजेक्ट कोहलपुर जाला त्यो कोहलपुर पनि महानगरमा हुन्छ, डुडुवा पनि महानगरमा हुन्छ । जहाँजे चिज उपयुक्त हुन्छ ।प्रतिस्पर्धा पनि हुदैन । अनेचुरल प्रतिस्पर्धा भन्छन् नि शहर शहर बिच त्यो हुदैन । यो सबै एक भैसकेपछि सबैलाई फाइदा हुने कुरा हो । सबैलाई म के अग्रह गर्छ भने कोहलपुर, खजुरा, डुडुवा, जानकीका सबै मित्रहरु एक भएर यसलाई बिशाल महानगर बनाएर सबैको हित हुने गरी सय बर्षको बिकासका लागि अगाडी बढौ ।
४ असार २०७८, शुक्रबार १४:१३ प्रकाशित